Kuchenesa Mazino | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Kuchenesa Mazino kunovavarira kubvisa danda, tarita uye makwapa akaunganidzwa pamazino.
Kugara Uchichenesa Mazino Chinhu Chakakosha Chikamu Chemuromo Unogwinya Uye Uchinyemwerera. Iyi Maitiro Ekujaira Anoitwa Mumahofisi Edu Needu Akarovedzwa Oral Hygienists, Uye Achasiya Mazino Ako Achinzwa Akasimba, Akachena uye Ane Hutano!
Kuchenesa kusati kwatanga, isu tichafanirwa kunyatsoongorora muromo. Nyanzvi yedu yemazino inoshandisa girazi diki kuongorora muromo kuona kuti hapana nyaya dzakakomba usati waenderera mberi nekuchenesa.
Isu tobva tazotanga nzira yekuchenesa nekubvisa mabara netartar kubva pazino pamusoro, padyo negumline. Dombo rinovaka pamusoro penguva, uye kana rikasiiwa rakaringana rinoomarara uye rinova tartar. Nzira chete yekubvisa tartar kubva pameno ine sikero, panguva yekuchenesa mazino, saka ive shuwa kuronga yekuchenesa kana iwe ukaona tartar ichivaka pameno ako.
Kana tartar yabviswa, tinopa mazino ako kukwesha kwakazara uye kupukuta tichishandisa yakakosha, yemazino yemagetsi uye yekuwedzera mushonga wemazino. Maturusi aya anobvisa chero danda uye tartar zvasara pazino, uye rinonyatsochenesa pamusoro peino zino.
Isu tinobva tanyatsovhura mazino, izvo zvinotipa mukana wekutarisa matadza uye kuona chero nzvimbo dzinonetsa. Mushure mekumhara, unogona kushambidza muromo wako kuitira kuti mushonga wemazino wakasara uye chikwangwani chidzike panodira mvura, uye nzvimbo dziri pakati pemeno dzakasara dzakachena uye dzakagwinya!
Nhanho yekupedzisira mune yedu yekuchenesa maitiro kuisa fluoride kurapwa kumazino kusimbisa iyo enamel, uye kukubatsira iwe kurwisa maburi. Fluoride inotaridzika uye inonzwa kunge gel, uye inoiswa kumazino mumuromo kweminiti. Mhedzisiro yacho kana fluoride kurapwa ichigara kwemwedzi, uye inofanira kukusiya wakadzivirirwa kusvika paunotevera kushanya.